GOWON NA-EBE AKWA… – hoo!haa!!
Onye chịburu ala anyị bụ ọchị-agha, Yakubu Gowon, ekwuela na ọ na-agbawa ya obi mgbe ọbụla ya chetara ka ndi ọlụọ ọnaa bụ Boko Haram nakwa ndị Fulani na-achị ehi si egbu ụmụ mmadụ ka ana-egbu ụmụ anụmanụ n’ala anyị.
Gowon gbara ama okwu ndia mgbe ọ bụụrụ aka na-achị steeti Imo bụ Rochas Okorọcha onye ọbịa na obi gọmenti state Imo di n’Oweeri, ụbọchị Satọdee gara aga.
Gowon sịrị na Naijiriya chọrọ udo nke ga-eme ka nwa-amala ọbụla biri n’udo n’ebe masịrị ya n’ala anyị.
Ọ sịrị, ” ọ na-ewute m mgbe mụ hụrụ ka esi egbu ndi mmadụ na-emeghị ihe ọzọ n’obodoa”.
Ọchị-aghaa bụ Gowon sịrị na ekpere ya bụ n’otu ụbọchị, na Chineke ga-emetụ ndia na egbu ndi mmadụ aka n’obi ka o siri metụ Pọl nke akwụkwọ nsọ aka, o wee chigharia bụrụ onye nkuzi kama ịbụ onye nkụgbu.
Gowon sịrị na ihe butere ha na steeti Imo bụ maka ekpere ha na-ekpe maka ọdị mma nke Naijiriya. Ọsịrị na ha na-eje akụkụ di iche iche n’ala anyị. Gowon kwuru na ọbụ oge nke ndi mgbada-ọdịda anyanwụ ala anyị ka ha biara na steeti Imo. O kenere aka na-achị steeti Imo maka nnabata ọma ya nakwa igosi ịnụ ọkụ n’obi ya maka ihe gbasra nzukọ Kraist.
N’okwu nke ya, Okorọcha yọrọ ka agbaa mbụ ahụrụ anya maka ịkwụsị aka ọrụ ọjọọ ndi Boko Haram nakwa nsogbu ndi ọzọ na-echere ala anyị aka mgba.
Ọ sịrị na ụmụ Naijiriya niile, na-agbanyeghị okpukpere nakwa agbụrụ onye si, ga-agba mbọ ka-eweta ụmụ nsogbua niile ndie na ngwụchaa.
Okorọcha sịrị na-edegharia aha ọchị-agha GOWON n’uche ndi bekee ọ pụta “ka anyị gawa n’ihu n’otu Naijiriya. Ọ sịkwara na ọ bụrụ na Gowon akwụsighị agha anyị lụrụ n’oge gara aga, ka o si kwụsị ya, ma kwue na onweghi onye meriri nakwa onye emeriri, na anyị aka enweghị ụdị otu Naijiriya anyị nwere tata.
Okorọcha sịrị na ihe eji mara aha Gowon bụ udo. N’okwu ya, Gowon kwụsịrịṅ agha ahụ n’ụzọ enweghị iwe n’ọnụma.
Okwuru na ha ga akwanyere ya ugwu na steeti Imo.
Previous Post: NWUNYE M MABIGARA MMA OKE, AGAM ACHỤPỤ YA – Ihe otu nwoke gwara ụlọ ikpe
Next Post: AGBAM-AKWỤKWỌ Ọ GHỌỌLA AGBAM-ỌTỌ?